USA: Garsoore wax ka bedalay Xayiraada Socdaalka Muslimiinta ee Trump • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / USA: Garsoore wax ka bedalay Xayiraada Socdaalka Muslimiinta ee Trump
USA: Garsoore wax ka bedalay Xayiraada Socdaalka Muslimiinta ee Trump
July 14, 2017 - By: Khalid Yusuf
Garsoore maxkamada gobalka Hawaii ayaa go’aan cusub kasoo saaray xayiraada socdaalka ee lix wadan oo Muslimiin ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Xayiraada Socdaalka Muslimiinta ee xukuumada Trump oo marar badan maxkamadaha Federaalka qaadaceen ayey Maxkamada Sare bishii hore ogolaatay in si kumeel gaar ah loo sii dhaqan geliyo qeyb kamid ah, iyada oo la qeexayo dadka loo diidayo inay soo galaan Maraykanka.
Xayiraada la saaray dadka ka imaanaya wadamada Soomaaliya, Sudan, Liibiya, Yemen, Siiriya iyo Iran, ayaa lagu sheegay in dadka dalalkaasi ka imaanaya Maraykanka loo ogolaanayo inay soo galaan dalkaasi hadii ay xiriir laleeyihiin shirkadaha dalkaasi oo ay ka shaqeenayaan ama ku imaanayaan codsiga eheladooda ku dhaqan Maraykanka.
Qeexida Ehelada ayaa lagu sheegay inaysan ku jirin waalidiinta sida Awoowe, ayeeyo, caruur awoowe loo yahay, seedi ama dumaashi, adeero, eedo, abti, habiyar, ilamaha adeer ama abti loo yahay iyo waliba ilma adeer ama ilma abti.
Hase yeeshee Garsooraha maxkamada heerka kowaad ee Hawaii, Derrick Watson ayaa sheegay in qeexidan ay tahay mid khaldan isla markaana la ogolaan doono ehelada ay ku jiraan dadka sida awoowe iyo ayeeyo, oo uu sheegay inay kamid yihiin ehelada ugu dhaw balse aysan ahayn dad qaraabo fog ah.
Garsoore Watson ayaa isaga kumid ahaa Garsoorayaashii maxkamada darajada 1aad ee horey u xanibay xayiraada Trump oo marar badan maxkamadaha heerka kowaad iyo Racfaanka ay laaleen, balse xeerkaasi ayey maxkamada sare markii danbe si kumeel gaar ah u fasaxday.
Go’aankan kale ee Garsoore Watson ayey guul u tahay dadka dacwada kasoo gudbiyey qaabka loo qeexay xayiraada Trump kusoo rogay muslimiinta.
Maxkamada sare ayaa lagu wadaa in ay dhamaanka sanadkan fadhi ka yeelato inay si tafaftiran ay uga gasho dacwada la xariirita xayiraada socdaalka Muslimiinta ee Trump, balse ogolaatay inta ka horeysa in loo sii dhaqangeliyo si kumeel gaar ah.